XOG XASAASI AH: Ma dhabbaa in JUBBALAND ay diyaarad u gaar ah soo iibsatay? & Fashil ku yimid… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI AH: Ma dhabbaa in JUBBALAND ay diyaarad u gaar ah...
Kismaayo (Halqaran.com) – Maamulka Jubbaland ayaa waxaa uu shaaca ka qaaday in markii ugu horreysay uu maamulkaasi soo iibsaday diyaarad u gaar ah.
Madaxweyne Ku-xigeenka 1aad ee Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan oo Saxaafadda la hadlay ayaa shaaca ka qaaday in Jubbaland ay markaan soo iibsatay diyaarad ay iyadu leedahay.
Madaxweyne Ku-xigeenka 1aad ee Jubbaland ayaa sheegay in diyaaradan ay soo daabuli doonto wafdiga Magaalada Kismaayo kaga qaybgalaya xafladda caleemo saarka ee Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Diyaaradan ayaa maanta wafdigii ugu horreeyay ka soo qaaday Magaalada Nairobi, iyadoona ka dejisay Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Diyaaradan oo ay la socdaan wafdi ay hoggaaminayeen Madaxweyne-yaashii hore ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug, Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa si toos ah uga degatay Magaalada Kismaayo.
Diyaaradda ayaan soo marin Magaalada Muqdisho, waxayna noqoneysaa tii ugu horeysay oo jebisa amarkii Dowladda Soomaaliya, ee ahaa in diyaaradaha tagaya Magaalada Kismaayo iyo kuwa kale ee ka imaanayaba looga baahan yahay in ay soo maraan Magaalada Muqdisho.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Jubbaland ay diyaaradaasi ka soo iibsatay dalka Koonfurta Suudaan, isla-markaana ay ka bixisay lacag dhan laba milyan oo dollarka Mareykanka ah.
Diyaaradaha rakaabka ee isaga kala goosha Kismaayo iyo magaalooyinka kale ayaa ka cararaayay in ganaax uu ku dhaco, haddii ay jebiyaan amarka dowladda.
fashilaad dowladda farmaajo
jebinta xayiraadii dowlada
Jubbaland oo diyaar gaar ah soo iibsatay